Nidaamka Meeleynta Caalamiga ah oo ah mashruuc caddaalad saynis ah - Geofumadas
Mee, 2012 Apple - Mac, Cartografia, Baridda CAD / GIS
Carwadii sayniska ee wiilkaygu way soo noqotay, ka dib dhawr doodood oo aan la yeeshay macallinka oo ku saabsan suurtagalnimada mashruuca, waxay ugu dambayntii ansixiyeen mid ka mid ah oo uu ku booday ku dhowaad mitir farxad ... anigu labadoodaba waan ku dhowaaday maxaa yeelay waa mowduuc aannu labadeenuba jecel nahay. . Sidoo kale maadaama mashruucani asal yahay, waxaan go aansanay inaanan mar dambe internetka ka raadin wixii qof walba horey usameeyay iyo sababta ugu weyn ee badh loo diido ama loo celiyo.
In kasta oo ay tahay sanad xasaasi ah, maadaama 13 ay tahay marxaladaas markay bilaabeen inay su'aalo ka weydiiyaan maamulka, cadaalad darada nolosha, ee udhaxeysa caruurta iyo dhalinyarada waxaan ku qasbanahay inaan waqti yar u huro arimaha aynaan daruuriga ahayn wadaagin. Wiil weyn, oo mustaqbal rajo leh ku leh adduunka suuq geynta iyo tikniyoolajiyadda ... in kastoo dhowr sano ay weli dib ugu soo noqoneyso hankiisa ku aaddan waxa u qalma oo lagu kala soocayo wax aan qiime u lahayn in diiradda la saaro.
Sawirka midig wuxuu u egyahay sidii shalay, markii aan kasbaday diidmada reerka ee dalbaday makiinada eber. Haha, way iga sheegteen aniga dhowr maalmood, taas oo hadda aysan mar dambe tirin maxaa yeelay sawirkaasi wuxuu ahaa mid la yaab leh.
U soo noqoshada mawduuca mashruuca, waxay ku saabsan tahay soo bandhigida hawlgalka Nidaamka GPS. Tan waa inaan ku shaqeynaa dhammaadka usbuuca, annagoo ka dhigeyna meel u dhexeysa buuq badan oo maalinta Hooyada ay keento; Waa inaad dhistaa qaab adduunka ah, oo leh meerayaal xiddigiska dayax gacmeedyada, qaaradaha oo la sawiray, latitude iyo longitude. Tan, wuxuu ku sharxi doonaa sida iskuduwaha juquraafi ahaan u shaqeeyaan, sida cuf-jireedku u oggolaado walxaha in lagu dhex wareego iyo soo dhaweynta calaamaddan oo leh aalado leh GPS isku dhafan.
Ka dibna iPad-ga wuxuu muujin doonaa meesha ay uumiyayaashu socdaan, inkasta oo aan la arki karin, waxaa jira codsi kuu ogolaanaya inaad isku daydo inaad u soo celiso cirka.
Ugu dambayntiina wuu sharxi doonaa sida nidaamkan, oo uu weheliyo qalabka wax lagu duubo ee 'gps receiver' ee taleefannada gacanta iyo barnaamijyada la soo saaray ay hadda keenaan, u oggolaanayaan dhul-bixinta, muujinta Google Earth iyo meesha ay kaga jiraan dugsiga. Oh, waxaan rabaa in aan arko taas sababta oo ah toy-ga ayaa u maareeya sida Game Game.
Marka, si ka duwan walaaca usbuucii la soo dhaafay oo leh dhicitaanka bogga, hadda waxaan haystaa mid aad u xiiso badan, waa inaan sidoo kale soo iibsadaa dahaar wanaagsan si aan uga ilaaliyo ipadka shilalka, inan la tababaro wiilka si in ka badan ku celcelinta sida parakeet u sharax wax In ka badan kaliya juqraafi ahaan iyo waxa ka sarreeyaba, tababar isaga si uusan u abuurin mashquul isagoo ku faanaya awoodiisa uu ku ciyaari karo Iron-nin ... Sida kaliya ayuu sameyn karaa!
Sanadkii la soo dhaafay kariyaha gaaska methane Wuxuu ku guulaystay kaalinta koowaad ee fasalka, dugsiga iyo carwadda dugsiga ee caasimadda. Si ka duwan, markan uma socdo koox, iyo ... maaddo xiiso leh.
Waan arki doonaa sida ay wax u socdaan ...
Post Previous" Hore Cadastre, ayaa lagu sharraxay qaybta caanka ah
Post Next Xaggee dadka isticmaala gvSIGNext »
2 Jawaab ayuu u bixiyaa "Nidaamka Meeleynta Caalamiga ah oo ah mashruuc caddaalad saynis ah"
Carlos Hernan isagu wuxuu leeyahay:
Biencausita adiga haddii aad ogtahay, waxaan ka soo qoraa Peru oo waxaan ka helaa mid aad u xiiso badan oo faa'iido leh bogga, salaan iyo guulo badan.